आपसी टकरावबारे के भन्छन् महरा र पुन?
नेपाल लाइभ सोमबार, भदौ १९, २०७४, १२:५३
‘प्रतिस्पर्धालाई अन्तरविरोधमा होइन, परिपूरकका रुपमा हेर्नुपर्छ’
- कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री
तपाईं र वर्षमान पुनबीचको सम्बन्ध कस्तो हो?
सुरुवाती चरणमा शिक्षक र शिष्यको हो। रोल्पाको लिवाङमा माध्यमिक विद्यालयमा मैले वर्षमान पुन, हाल उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख ओनसरी घर्ती, नेत्रविक्रम चन्द, कुलबहादुर केसी, जयपुरी घर्ती, झक्कु सुवेदी, सन्तोष बुढा मगर लगायतलाई गणित र विज्ञान पढाएको हुँ। त्यसबेला मैले उनीहरुलाई नेकपा मसाल र त्यो निकट विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध गराउन भूमिका खेलेको थिएँ। यस हिसाबले उहाँहरुले मबाट राजनीति सिक्नु पनि भयो होला। अहिले एउटै पार्टी आन्दोलनमा भएको हुनाले हाम्रो सम्बन्ध राजनीतिक सहयोद्धा–सहकर्मीको हो।
तपाईं र पुनबीचको सम्बन्ध कडा प्रतिस्पर्धातिर परिणत भइरहेको देखिन्छ नि?
हुन त यसबारे तपाईंसँग केही न केही प्रमाण होलान्। पुनले मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो मलाई जानकारी हुने कुरा भएन। बाहिरबाट खेल्ने मान्छेहरु पनि होलान्। तर, व्यक्तिगत रुपमा उहाँ र मेरो सम्बन्ध अहिले पनि राम्रो छ। उहाँले मलाई आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिरहनुभएको छ। मैले पनि गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ। म पुनजीलाई राजनीतिक रुपले हेर्छु। उहाँले पनि सायद त्यसैगरी हेर्नु हुन्छ होला।
भनेपछि प्रतिस्पर्धा छैन?
एउटै पार्टी राजनीतिमा हुनुका नाताले कहिले सहयोग, कहिले सामान्य प्रतिस्पर्धा, कहिले झिनामसिना अन्तरविरोध, छलफल हुनु स्वाभाविकै हो। तर, हामीबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा छैन। बरु मलाई त गर्व छ किनभने मैले यति धेरै साथीहरु उत्पादन गर्न सकेँ। राजनीतिक रुपमा उहाँहरु यति माथि उठ्न सक्नुभयो। अब मैले त आराम गरे पनि भयो। किनकि, हाम्रो राजनीतिक बिँडो थाम्ने साथीहरु उत्पादन हुनु खुसीको कुरा हो।
हामीबीच पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत अनेकौं मान्छेले खेलेका होलान्। तर, मैले त्यस्तो कडा प्रतिस्पर्धाको अनुभूति गरेको छैन। हामीबीचको प्रतिस्पर्धालाई अन्तरविरोधमा होइन, परिपूरकका रुपमा हेर्नु/बुझ्नुपर्छ।
तपाईंका नजरमा पुनका सबल पक्ष के हुन्?
उहाँ सम्भावना भएको युवा नेता हो। मैले कहाँ, के, कसरी सहयोग गर्नुपर्छ। तयार छु।
‘मेरो प्रतिस्पर्धा महराजीसँग नभएर जिम्मेवारी लिने सवालसँग हो’
- वर्षमान पुन, नेता, माओवादी केन्द्र
तपाईं र महराबीचको सम्बन्ध कस्तो हो?
पहिले शिक्षक र विद्यार्थीको हो। उहाँ मेरो राजनीतिक गुरु पनि हो। अहिले हाम्रो सम्बन्ध एउटै राजनीतिक आन्दोलनको सहकर्मी र सहयोद्धाको हो। अलिकति टाढाकै भए पनि हामी आफन्त पनि पर्छौं। उहाँको जेठी छोरीको विवाह मेरो जीवनसंगिनी (ओनसरी घर्ती) को दिदीको छोरासँग भएको छ।
तपाईंहरुबीच बेला–बेलामा टक्कर परेको देखिन्छ नि?
पार्टीभित्र वैचारिक–राजनीतिक छलफल चल्छ। बेला–बेलामा जोडकोणहरु, पक्षधरताहरु फरक हुन सक्छन्। तर, आधारभूत रुपमा हाम्रो ठूलो मतभिन्नता कहिले पनि भएको छैन। पार्टीभित्र छलफल–बहस हुँदा मैले जहिले पनि उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँले पनि आफ्नो विद्यार्थीका रुपमा माया गर्नुहुन्छ।
तपाईंले यसो भने पनि हेटौंडा महाधिवेशनदेखि विराटनगर सम्मेलन हुँदै पेरिसडाँडा निर्वाचनसम्म तपाईंले उहाँसँग महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अडान लिइरहनुभयो। अघिल्लो पटक महरालाई गृहमन्त्री बन्नबाट रोक्न लागि पर्नुभयो भन्ने आक्षेप पनि छँदैछ। यो के हो त?
हैटौंडा–विराटनगर हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नयाँ पुस्ताबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेकै हो। तर, महराजी र मेरो बीचमा मनमुटाव र पदका लागि झगडा भएको होइन। महराजी नभएर अर्को कोही हुँदा पनि मेरो त्यो पदमा दाबेदारी हुन्थ्यो नै। त्यसैले मेरो प्रतिस्पर्धा महराजीसँग नभएर जिम्मेवारी लिने सवालसँग हो। जहाँसम्म गृहमन्त्रीको कुरा छ, अघिल्लो पटक उहाँ गृहमन्त्री नभएर के भयो त? झन् यसपटक परराष्ट्रमन्त्री हुनुभएको छ।
तपाईं र महराबीच मिल्ने पक्ष के हो?
समन्वयकारी भूमिका, गम्भीरता र उदार स्वभाव हामी दुवैको मिल्ने पक्ष हो।
* प्रस्तुति: जिवेश परियार
(यो शृंखलाको अन्तिम भाग प्रचण्डको ‘प्यारा’ को? मंगलबारको संस्करणमा)